Kedu esi eji Google search engine?
Webmasters na-eji ụzọ dị iche iche dị iche iche nweta nweta mmiri njikọ na weebụsaịtị ha. Mgbe ụfọdụ, ụzọ ha si eme ihe abụghị ndị iwu. Ejighi emeputa backlinks nile. Dịka ọ na-emekarị, ụfọdụ njikọ gị na nke ọzọ nwere ike ịba uru ma nweta ya n'ụzọ ziri ezi, ebe ndị ọzọ na-apụta àgwà dara ogbenye ma ọ bụ enweghịzi.
Google na - eme ihe niile ga - eme ka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ wepụ njikọ ha na - adịghị mma ma gbanahụ ụlọnga. The Google Disavow Tool ghọọ ezigbo ụzọ maka online ahịa kemgbe na Penguin update kụrụ. N'ime afọ 2012 Google Penguin melite meriri search engine optimization sphere na wepụrụ niile ogbenye mma spammy njikọ si na netwọk blog. N'otu aka ahụ, ọ na - emepụta nsogbu ọhụrụ ma merie ụwa SEO dum. Webmasters malitere ịnwa imebi usoro ihe a site na ịmepụta backlinks spam maka saịtị ikikere, n'ime mgbalị iji belata ọnọdụ ha na SERP. Ụfọdụ n'ime mgbalị ndị a mezuru. Ọtụtụ ndị na-asọmpi na-emetụta ọtụtụ ụdị ụdị. O mere ka o sie ike ijikwa njikọ niile na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụ ya mere Google ji kpebie ịmepụta Ngwá Ọrụ Njikọ Disavow maka inye ohere maka ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ iji nyochaa njikọ ha niile. Nke a backlinks search ngwá ọrụ nyeere ọtụtụ narị puku ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ịchịkwa ha backlinks ọnọdụ.
Gini mere anyi ji choro Google Disavow Links Tool?
Usoro ọ bụla SEO nwere ike ịmetụta ọnọdụ na saịtị gị, karịsịa ebe Google mere ka o doo anya na ha ga-ekpebi saịtị niile metụtara spam njikọ ọ bụla.
E nwere otutu ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ ga-achọ inweta njikọ ha na saịtị ha na-akpaghị aka ma kwenye na ọ ga-ekwe omume ịmepụta njirimara mmekọrịta dị n'ime otu ma ọ bụ ụbọchị abụọ. N'ezie, onye ọ bụla nwere ike ịnye iziga ọrụ ntinye akwụkwọ mgbaàmà na ịnweta ọtụtụ puku backlinks na ebe nrụọrụ weebụ ya n'emeghị mgbalị ọ bụla. Otú ọ dị, o yikarịrị ka ọ ga-emetụta ọkwá search engines ọ bụla. Isi iyi weebụ gị agaghị adaba na ọkwa site na ntanetị njikọ dị otú a, ma nnukwu ọnyà spam nwere ike imebi mgbalị niile SEO gị.
Google Disavow Links Tool is specially designed to give power to a webmaster to report and submit low-quality spammy links to Google, ma ọ bụrụ na ha na-akụ site na ndị ha na-agba ọsọ online, nke a ga-enyere ha aka pụọ na ya ma kpochapụ aha ha ngwa ngwa.
Google backlink ngwá ọrụ ịchọpụta spam njikọ na weebụsaịtị na-emepụta ha, na ọtụtụ ikpe, ha agaghị emerụ gị na saịtị rankings. Otú ọ dị, ọtụtụ isi ihe nchọgharị weebụ nwere ike imetụta ihe omume ndị a, ma ọnụ ọgụgụ ha na-ebili na nke ọ bụla Penguin melite.
Google agagh adighi uru backlinks site na ngalaba obula nke i kwuru na Google Disavow Links Tool. Ngwá ọrụ a bara uru ma ma engines ma na webmasters dịka ọ na-enyere aka ịmata ezigbo uru nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla ma dozie mmebi iwu Source .